Isikhokelo esibuhlungu se-CMO sika-2014 kwiNdawo yokuHlala kwezeNtlalo Martech Zone
NgoLwesithathu, Julayi 30, 2014 NgoLwesithathu, Julayi 30, 2014 Douglas Karr
Izolo, bendiyigqibile le posi kwaye bendizokucofa ukupapasha xa nditshayisa ibhiya kwiLaptop yam. Ndiyathemba ukuba yayingeyiyo ikarma eza kukhaba i-butt yam. Ilaptop iyasinda, kodwa ngandlela thile iposti yebhlog yanyamalala. Ndibhala le posi ngevumba elibi lebhiya ngasemva ukuze undikhumbuze ukuba ndihlale ndisezantsi.
Nantsi into, ndicinga ukuba le infographic eyoyikisayo. Ngokubonakalayo, ayinakho ukubaliswa kwebali lilonke konke. Kukuqokelelwa nje kwezimvo eziqokelelwe kumanqaku kunye neengxelo ezithi- ndiyakholelwa- ziya kwenza into embi kwindlela yombutho yokusebenzisa isicwangciso esiliqili seendaba zentlalo ukubandakanya nokwakha ishishini kwi-Intanethi. Ayilahlulwanga i-B2B, i-B2C, ubungakanani beshishini okanye icandelo leshishini. Ugh.
Okokuqala nokuphambili, kukusilela kwayo nayiphi na into ekhankanyiweyo inkalo yomntu yentlalo iyandothusa. Ukwazisa ngeBrand akufani nokunxibelelana komntu. Ukubona ilogo kukwazisa uphawu. Ukuqokelela igunya kunye nokuthembela kwi-intanethi, ukuqhuba iindwendwe ezininzi ukuguqula kukudibana kwabantu okufuna ukubandakanyeka ngokweemvakalelo. Andikholelwa ukuba ukwazisa ngeyona nto iphambili ekusebenziseni amaqonga eendaba ezentlalo, ndiyakholelwa ekwakheni igama lomntu. Abantu bayabathemba abantu… kwaye abanye baba bantu basebenzela iimveliso. Andinathethathethwano okanye ndifunde izimvo zeempawu kwi-intanethi, ndiyathetha, ndabelana kwaye ndithenga ebantwini.
Andikhathali ngezithuthi. Ukuhamba kwezithuthi akubalulekanga ngaphandle kokuba ukugcwala kwezithuthi kuqhuba iziphumo zeshishini. Ukuziphatha kunye nokuguqulwa umba ngaphezu kwetrafikhi. Ndingaya kuthenga iintengiso eziqhuba amakhulu amawaka eembono kwiwebhusayithi, ayinamsebenzi ngaphandle kokuba ukugcwala kufanelekile, kunomdla, kwaye kukhokelela kwindlela yokuguqula. I-LinkedIn "kulungile" kodwa i-Facebook ilungile? Yekabani?
Indawo yemidiya yoluntu yile hayi malunga neqonga, Imalunga nento abayenzayo kakuhle kwaye ayenzi kakuhle ukunceda amashishini axhumane namathemba abo kunye nabathengi. Endaweni yamaqonga, oku kufanele ukuba kuthethwe nakowuphi umxholo okwaziyo ukwabelana nawo, ukuba uyakwazi njani ukwabelana ngawo, kunye nento umthengi okanye ithemba anokuyenza ngayo. Ngaba banokunxibelelana ngako? Ngaba banako ukwandisa umyalezo wakho kubaphulaphuli abafanelekileyo? Ngaba banokuthenga kuyo? Amaqonga aya kuza ahambe, kodwa isimilo sentlalo sisitshixo.
Unxibelelwano lomthengi alunamsebenzi, ubukrelekrele babathengi yenza. Luthini uluvo lwegama lakho kwi-Intanethi? Waziwa njani xa kuthelekiswa nokhuphiswano lwakho? Yintoni abantu abayifunayo kwishishini lakho? Ngaba ulawula igama lakho kakuhle? Ngaba ubalungiselela kakuhle abathengi bakho kwindawo yezentlalo apho amandla okwabelana ngeenkonzo nabathengi ekwabelwana ngawo esidlangalaleni? Wenza ntoni nomthamo ongapheliyo wedatha kunye nobukrelekrele obuphandle malunga nethemba lakho kunye nabathengi?
Akukho ngxoxo mobile (ngaphandle kwe-Instagram's app), basekuhlaleni, yaye intengiso yoluntu? Ezi zinto zintathu zosasazo lwentlalo ezivelisa olona phuhliso, buzz kunye neziphumo? Njani malunga nokuba iqonga ngalinye linokuxhuzulwa njani kwizixhobo kwaye zijolise ngokufanelekileyo? Andikholelwa ukuba akukho lwazi malunga noku xa uthetha nembonakalo yemidiya yoluntu.
Andifuni nokungena kwindlela i-SEO eyenze ngayo phezu kwetafile. Ukuba ufuna ukukhangela i-infographic enkulu enokukunceda kwimizamo yokuthengisa kwimidiya yoluntu, jonga Isikhokelo seNgcaciso yokuHamba kwiMithombo yeendaba yeNtlalo, Indlela amashishini asebenzisa ngayo iMidiya yokuNxibelelana, Intlalontle ekuHlaleni kwaye Imithetho ye-Social Media ngolwazi oluncedo.
Ndiyathanda ngokwenene CMO.com -Ndifunda ulwazi olumangalisayo kunye neengcebiso apho yonke imihla, kodwa le infographic iluphose ngokupheleleyo uphawu kumthengisi ophakathi wokusebenzisa imithombo yeendaba ngokukuko. Sukubetha nje itafile kwi-Photoshop kwaye uyibize infographic. Fumana i uyilo lwe infographic yobungcali kwaye uxele ibali elinokuthi abathengisi baliqonde, balidle, balikholelwe kwaye babelane ngalo!
Ungayijonga le infographic kwaye awuvumelani nam. Ndingathanda ukwazi, nangona kunjalo, zeziphi iingcebiso ezinokuqokelelwa ezivela kule infographic kunye nendlela oza kuyisebenzisa ngayo kwishishini lakho.
tags: Indawo yentlalo ka-2014infographic engalungangaUlwaziso lwebrandcmounxibelelwano lwabathengiFacebookGoogle +kwi-infographicuyilo lwe infographicinstagramLinkedInTwilleyinfographic engalungangaSEOi slidediukuveliswa kwezithuthiTwitteryoutube
Imephu yeNdlela yokuThengisa ngeDijithali ka-2014